Mid ka mid ah madaxda SD oo aflagaadeeyay Quraanka | Somaliska
Midka mid ah madaxda xisbiga cunsuriyada ee SverigeDemokraterna (SD) ayaa sheegay in Quraanka ay ku taalo in Muslimiintu ay kufsiga u isticmaali karaan cinqaab ahaan. Ninkaan oo lagu magacaabo Michael Hess ayaa intaas ku daray in kufsigu uu yahay qeyb ka mid ah dhaqanka Muslimiiinta.
Wariye ka tirsan wargeyska Blekinge Läns Tidning ayaa arintaan wax ka waydiiyay afhayeenka h0gaamiyaha xisbiga in uu ka jawaabo hadalka ninkaan. Afhayeenka oo lagu magacaabo Linus Bylund ayaa wargeyska u sheegay in hadalka ninkaas uusan ahayn been oo ay Quraanka ku taalo arinta kufsiga.
Wariyaha ayaan intaas uga harin balse waydiiyay halka ay Quraanka uga taalo in kufsiga loo isticmaali karo cinqaab ahaan. Isagoo ku jawaabay sidaan. “Ma hubo meesha ay ugu taalo, runtii ma aqaano balse waxaa la cadeeyay in ay ku taalo Quraanka”. Mar la waydiiyay in uu waligiis Quraanka akhriyay , ayuu ku jawaabay maya.
Jawaabtaas ayaa muujinaysa aqoon la’aanta cunsuriyiinta iyo doqonimadooda. Waxay ka hadlayaan waxaysan aqoon u lahayn iyaga oo isku sheegaya siyaasiyiin.
Markii ay warbaahinta si xoogan cadaadis u saareen in ay cadeeyaan hadalkooda ayay qaar kale oo ka tirsan madaxda SD ku doodeen in aysan Quraanka ku qornayn balse kufsigu uu ku badanyahay wadamada Muslimiinta. Iyo in wadamada qaarkood sida Pakistan maxkamad ay dumar ku xukuntahay in la kufsado.
Si kastaba ha ahaaee, weerarada ay cunsuriyiintu ku hayaan Islaamka iyo Muslimiinta ayaa siyaaday bilihii la soo dhaafay iyadoo la filayo in ay siyaadi doonaan sanadkaan maadaama lagu jiro xili doorasho.
Dagaal cusub oo lagu qaadayo cunsuriyada
Aabayaasha oo dagaal ugu jira masuuliyada caruurtooda
muuda dheere says:
sxb jimcaale war bixintaan aa soo qortay wxey cadeyn u tahay in aad cilmiga saxaafada habayaraatey waxba ka aqoon sababta waxey tahay ciwaanka aa ugu magacddartay warbixinta .
iga maha weerar lkn waa loo heli garay ciwaan kale oo munaasaab ku ah hadii aa saxaafada wax ka taqaano.
Ciwaanka AAD AYUU QALBIGEENA U DHAAWACAY !!
Maahan ciwaan Munaasib ah , si kale u dhig ! walaal laakiin hadalku Aad ayuu u QARAARYA markaa aqridana qalbigaaga ku xanuunaa ciwaanka!!
ASC SUBXAANALAAH war waxaan ookale wax aan fiirsan karno ama aan ka indhaqarsan karno maaha hadaan nahay dad Islaam dhab ah kolba kuwaan anagaa usoo haajirnay oo ugu nimid meesha quraankii kariimka ahaa lagu aflagaadeeynayo oo xitaa wax yar aanu kageeysan karine halaga dhiidhiyo hadalka doqonka hana labanaanbaxo ugu yaraan ilmaa iga maqan iyo naag aa iga maqanba waaloo qaayladhaaminayee
January 12, 2014 at 12:52
galgalka galka dhalay wacalka ka ah oo nijaska ah waxan u shega in ilaaheyka jasey dono hadalda qalafsan ee muslimka oow u qabo ama oow le yahay mar kasta
January 12, 2014 at 12:54
Subxaanalaahi allah ayaa xumaan ka nazahan
Gaal nijaas ah oo hadana cunsuri ah inuu aflagaado soo gaarsiyo quraan ka wallahi waa ayan daro oo waxba aan laga qaban karin lkn ilaah ayaan aga baryeynaa ciqaab ded deg ah inuu samada aga keenno midkasta oo aflagaadeeyo quraanka ama neceb islaamka
January 12, 2014 at 13:00
cinwaaka badal waa halis danbi ah kunaqo nafsadaada culimada latasho waxaan ookale markaad qoreesid
Waxaad umaleysaa tittle ama ciwaanka inuu wax ka qaldanyahay
January 12, 2014 at 14:44
Waxaa nahay AQRISTAYAASHA Bogga Somaliska , mana aan jeclin Ciwaanka habkaa u qortay , Jimcaale walaal inaad na xushmeydo , oo aad ciwaanka bedeshaan kaa codsaneynaa….
Walal jimcale fadlan ciwanka badal waxakale ku habon ku qor fadlan
January 12, 2014 at 15:02
Mahadsanid walal jimcale
January 12, 2014 at 15:18
jimcaale waxaan leeyahay waxan oo kale oo gaaladu iska dhahayaan lama soo qoro adiga danbi kugu tahay sxb ee waxaasi oo kale ha noosoo qori hadalka uu iska dhahay gaal aan garaneyn ilaahay abuurtay ,
markaasi sxb badal ama ha noo sheeg niyada ayaan ka xumaatay markaan aragno waxaaasi gaaladu soo qoranayaan oo kale
January 12, 2014 at 15:38
Abdisalam haddiii aan laguu soo qorin sidee ku ogaanaysaa weerarka ay nagu hayaan gaaladu? Mise waxaad doonaysaa in aad indhaha ka qarsato oo aadan difaacin diinta? Mida ku saabsan cinwaanka anigu wax dhib ah uma arag waayo waxa uu ka turjumayaa hadalka uu yiri ninka iyo nuxurka mowduuca. Quraanka in uusan ku qornayn kufsi iyo hadal xun midna waan wada ognahay. Marka waxaan leeyahay yaan lagu mashquulin waxyaabaha yaryar ee hala eego nuxurka iyo ujeedada mowduuca, oo halaga doodo sidii laisaga difaaci lahaa weerarka joogtada ah ee gaalada cunsuriyiinta ah ay ku hayaan diinta. Inta aan ku mashquulsanahay cinwaan, iyo maxaa loo soo qoray fikrad cusub ma keeneyno.
War kan qof isku qarxiso maala waayay bastartaha aragga xun leh!!
Ilaah ayaa kaa aar’goosan doono dheh, mida kale cunsurnimadooda hadee soo saa’ido iyo hadee yaraataba wax ee Muslimiinta ka qaadi karaan malahan!!
Ibnu islaam says:
Waa ciil wax asaga lamid ah in ay quraanka kareemka afkooda kusoo qadaan laakiin ilaahey waxaa hubaal oo uga baryaa in jazahiisa aduunka lagu tusoo ibnu xaaraamka gaalka lacnatulaah caleeyhim
jimcaale waa mahad san tahay baryahan danbo gaaladu dinta islamka werar ey ku hayan marka
oo tas waxaa ka horeysay masajidki la kenay madaxa dofar marka aniga talo ahan teyda waxaan dhihi la hay musliminta dagan swedhan waa in ey dhigan banan bax weyn oo hadalkas loga soo hordedo
asc walaala yaal kuligiin waxan waa wax soo jiri jiray gaalo diin muslim ma rabto mana taqaano allihii abuuray oo diinta soo dajiyey ma yaqaanaan wexey kala og yihiin aaba iska yar wexey sheegayaane wexey ku raadinayaan dhibco si ey taageero uga helaan dadka islaamka neceb tan ey ku hayaan masaajida waxan dhihi lahaa ficil halaga muujiyo oo hala dareen siiyo in uu islaamku ka xun yahay hadii la banaan baxo ama dadka fareeniyada sheegtay oo isku sheegay in ey bulshada matalaan waa in ey wax ka geystaan arintaan bulshada muslimiinta ahna la kaashadaan wabilaahi towfiiq
ASC yaa muslimin ninkasu waa nin gaal ah dinta islaamkana waxba kama yaqaan hadana galadu waa kala jirta e waa kuwi neecbay dadka aan wadankan u dhalan marka sikale waxba loguma dhimi karo lakin si eysan awood u yeelan waxa soo dhaw dorasho e yaan cod lasiin haddi kale waxey helayan awood ey dadka wadankan degen si aysan u kalfaquuqin
Kkkk war quranka wax uma dhibi karaan qurankana qofna daafac kama rabo ilaah ayaa yiri ( anaga ayaa soo dajinay ..anagaana xafidayna )mark
Hadalkaasina malin ayaa laga jaasinayaa …
January 18, 2014 at 22:33
asc waad salaamantihiin dhamaan maxaad haysaan asaxaabeey